Shiinaha Customized boorsada boorsada dugsiga hoose, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda ardayda > Boorsada dugsiga hoose
(1) Boorsadan loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga hoose waa mid aan biyuhu xirin, u adkeysanaya xirashada, yareynta culeyska, isla markaana leh adeeg dheer. (2) Naqshadeynta suunka loo yaqaan 'S-shaped design' ayaa ah naqshad ergonomic ah. (3) Nidaamka daabacaadda ayaa ka dhigaya boorsada iskuulka ardayda dugsiga hoose waxay u muuqdaan kuwo la jaan qaada baahida bilicsanaanta ardayda dugsiga hoose.
1. Boorsada dugsiga hoose product introduction:
(1) Boorsadan dugsiga hoose waxay ka kooban tahay 600D maro Oxford oo biyaha celiya. Qeybta ugu weyn ee maaddadan waa polyester. Astaamaheeda ugu waaweyn ayaa ah iska caabbinta duufaanka, xirashada iska caabbinta, kala duwanaanta midabka midabka leh, iyo soosaaridda boorsooyinka dugsiga ee ardayda dugsiga hoose.
(2) Waxaan u adeegsannaa dharka 210D nylon Oxford sida dahaarka gudaha ee boorsada dugsiga ardayda dugsiga hoose.
(3) Shandadan iskuulka ee ardayda dugsiga hoose waxay isticmaashaa habka wareejinta kuleylka si ay ugu daabacaan qaabka marada. Shandada boorsada leh ee qaabka qurxoon loogu daabacay waxay umuuqataa mid fudud inay caruurtu jeclaadaan
(4) Waxaan uqeybineynaa boorsadan dugsiga hoose 3 qaybood, qayb walbana waxay leedahay shaqadeeda gaarka ah, dabcan, sidoo kale waa loo isticmaali karaa si dabacsan.
(5) Gudaha waxaa ku jira boorso bac kumbuyuutar ah, oo qaadi karta laptop 15-inji ah.
(6) Si loo hubiyo raaxada iyo raaxada ardayda, waxaan si gaar ah ugu talagalnay suunka garabka ee boorsada iskuulka si loo yareeyo culeyska
(8) Naqshadaynta qaabdhismeedka suunka qaabdhismeedka 'S-shaped' ayaa ah mid ergonomiyaal badan, kala firdhinaya xoogga, aadna ugu raaxeysan in la isticmaalo, isla markaana leh saamayn yaraynta culeyska.
(9) Boorsadan loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga hoose ma keydin karto oo keliya boorsooyinka iyo qalabka dugsiga, laakiin sidoo kale dalladaha, muraayadaha biyaha iyo waxyaabaha kale.
(10) Farshaxanimada farsamada tolidda dharka waxay ka dhigeysaa boorsada iskuulka mid aad u muuqaal adag. Awoodda tolidda waxay si toos ah u saameyneysaa kalsoonida boorsada, oo aan aad ugu kalsoon nahay.
2. Xuduudaha sheyga boorsada dugsiga hoose (qeexitaannada)
600D maro Oxford ah oo biyaha celisa
3. Astaamaha iyo codsiyada alaabada boorsada dugsiga hoose
(1) Boorsadan boorsada ee ardayda dugsiga hoose waa mid aan biyuhu xirin, u adkeysanaya xirashada, yareynta culeyska, isla markaana leh adeeg dheer.
(3) Nidaamka daabacaadda ayaa ka dhigaya boorsadan iskuulka ardayda dugsiga hoose inay u ekaato mid la jaanqaadaysa baahiyaha qurxoon ee ardayda dugsiga hoose.
(5) Bacdan dugsiga hoose waxay ku habboon tahay ardayda dhigata fasallada 3-6.
(6) Shandaddan iskuulka ee loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga hoose waxay ku habboon tahay gabdhaha.
(7) Dhammaan agabyada dugsiga ee la iibsaday bilowgii sannad dugsiyeedka, boorsada ilmaha ayaa laga yaabaa inay tahay shayga ugu iibsiga badan. Laga soo bilaabo dib u dhigista buugaagta culus ilaa iskuulka, ilaa sanduuqyada qadada ee daadanaya, boorsooyinka ardayda dugsiga hoose waa inay ahaadaan kuwo waara, hadii kale waxay sii socon doonaan ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka. Boorso adag oo adkeysi leh ayaa yareyn karta culeyska celcelis ahaan waxayna yareyn kartaa walwalka walxaha culus, taas oo muhiim ah maxaa yeelay bacaha iskuulada isku dhafan ee geesaha laga buuxiyo waxay sababi karaan dhibaato qoorta iyo garabka waqti ka dib.
(8) In kasta oo qaabka iyo midabka boorsada ay muhiimad gaar ah u yeelan karaan ilmahaaga, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad mudnaan siiso naqshadaynta boorsada sida ugu macquulsan uguna macquulsan qoorta, garbaha iyo dhabarka. Si taxaddar leh ugu fiirso waxa ilmahaagu u tagayo ama ka tagayo dugsiga si aad u hubiso in aanay ku jirin buugaag culus ama kuwa wax ku dhejiya gaadhiga. Tani maahan fikrad xun. Yaraynta culeyskooda ayaa runtii caawineysa!
5. Xirxirida iyo rarida boorsooyinka dugsiga hoose
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 45cm X 30cm X 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 6.5Kg
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 5Kg
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka iskuulkan hoose ee boorsada iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
(9) Haddii aad ubaahantahay muunad ka mid ah boorsada iskuulka hoose, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(5) Waxaan si dhakhso leh kuugu soo wargalin doonnaa horumarka wax soo saar ee alaabta dalabka inta lagu gudajiro wax soo saarka, si aad u fahmi karto heerka amarka si dhakhso leh
Jawaab: Haa, waxaan nahay soosaara tayo sare leh oo Shiinaha ka sameysan bacaha. Warshaddeenu waxay leedahay aag la isticmaali karo oo dhan 18,000 oo mitir murabac ah.
Q3: Maxay yihiin adeegyada oraahyada ee aad bixiso? Waa maxay muddada oraahdu? waa maxay habka loo sheegay qiima dhaca?
S6: Waa maxay awoodda wax soo saarkaagu?
S7: Mudo intee le'eg ayey tahay waqtiga dhalmadaadu?
S8: Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
S9: Mudo intee le'eg ayay wareegga dhalmadaadu tahay?
Calaamadaha kulul: Boorsada dugsiga hoose, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka